कक्षा सुरु नहुँदै विद्यालयका कम्प्युटर चोरी – Khabar Silo
बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पशुपतिनाथ बनरझुल्लाको १५ थना कम्प्युटरका सरसमान चोरी भएको छन्। कक्षाको ताल्चा खोले कम्प्युटरको १५ थाना वटा सिपियु , एकथान प्रोजेक्टर र तीनवटा राउटर चोरी भएको हो।
विद्यालयमा जडान गरिएको सीसीटिभी क्यामराको विद्युतीय तार लाइन कटेको समयमा काटेर चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षक अभावमा कम्प्युटर कक्षा संचालन भएको थिएन। कक्षामा कम्प्युटर किताबबाट सैद्धान्तिक ज्ञान पाएका विधार्थीहरु प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने आशामा थिए। कम्प्युटर चोरी भएपछि विद्यार्थीहरु निराश बनेका कक्षा १० की बालिका मञ्जु कुमारी महतोले बताइन्।
पक्की भवनको कोठाभित्र राखिएका समान चोरले विद्यालय लगाएको ताल्चा खोलेर समचान चोरी गरेपछि फेरि त्यसै आकार प्रकारको ताल्चा लगाइदिएका थिए। कोठामा नयाँ ताल्चा देखिएपछि चोरी भएको अनुमान गरिएको थियो। प्रहरी चौकी किसाननगर असई रामइश्वर महतोको प्रहरी टोली विद्यालय पुगेर ताल्चा काटेर हेर्दा कम्प्युटरका सरसमानहरु चोरी खुलेको थियो।
चोरी भएका १५ थना कम्प्युटरका सिपियु बरामद भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका इन्स्पेक्टर अशोक साहले जनाए। भंगहा नगरपालिका–४ पुरानो रातु खोला किनारको विभिन्न स्थानबाट फालेको सो सरसमान प्रहरीले बरामद गरेको हो। चोरी गर्ने गिरोहको खोजीमा प्रहरी टोली खटिएको छ।
जापान काम गर्न जाने अवसर ! २३ सय नेपाली कामदार लैजादै,भाषा र सीप परीक्षा लिन सुरु ! अरु के-के आवश्यक पर्छ !
काठमाडौँ । जापान रोजगारीमा नेपाली युवाको अपेक्षित सहभागिता हुन नसकिरहेका बेला जापानले झण्डै दुई हजार बढी का’मदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान फाउण्डेशनले यही जनवरीमा एक हजार र आगामी मार्चमा एक हजार ३०० नेपाली का’मदार लैजाने तयारी थालेको छ । फाउण्डेसनले एक सूचना जारी गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो । जनवरी ७, ८, […]
रियाद, १० असोज । साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकहरुलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय गरेको छ । अति रुढीवादी मुस्लीम मुलुक साउदी अरबले शुक्रबार पर्यटकहरुलाई भिसा दिने घोषणा गरेको हो । तेलको व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको साउदीले अब पर्यटनलाई पनि अर्थतन्त्रको पाटोको रुपमा विकास गर्न लागेको हो । घुम्नका लागि विदेशी नागरिकहरुलाई खुल्ला गरिएपनि केही सर्त […]
काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर आङ्शिकदेखि सामान्य बदली भई चिसो बढेको छ । उक्त वायुको प्रभावले आज देशका उच्च पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात र पहाडी भेगका केही स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमपूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुन बाहिरिएसँगै निरन्तर न्यूनतम तापक्रम घट्नेक्रम शुरु भएकाले चिसो महसुस भएको महाशाखाका मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले […]
नेपाल अब कुनैपनि देशकाे दबाब र प्रभावमा छैन: परराष्ट्रमन्त्री